६९ जिल्ला घुमिसकेका नयाँघरे भन्छन्ः ‘जीवन बुझ्नलाई घुम्नैपर्छ’ - Pahilo News
६९ जिल्ला घुमिसकेका नयाँघरे भन्छन्ः ‘जीवन बुझ्नलाई घुम्नैपर्छ’
यात्रा–निबन्ध लेख्न माहिर युवराज नयाँघरे प्रायः घुम्न रुचाउँछन् । फुर्सद मिल्यो कि चारभञ्ज्याङभित्रको उकुसमुकुसयुक्त जीवनलाई केही दिनका लागि ‘बाइबाई’ गरेर उनी पहाड, हिमाल वा तराईका समथर फाँटहरुमा बिसाउन चाहन्छन् । देश–विदेश घुम्दाका अनुभूतिलाई उनी सुन्दर, चोटिला र लययुक्त शब्दहरुका मालामा बुन्न चाहन्छन् । त्यही क्रममा उनले यात्रा–अनुभूति समेटिएका थुप्रै कृतिहरु निकालिसकेका छन् । पछिल्लो समय ‘हाराबारा’ निकालेका नयाँघरेले त्यसमा पनि तिनै यात्रा–अनुभूतिहरुलाई केलाएका छन् । यात्राका क्रममा आफूले सँगालेका सुखद् र कठिन परिस्थितिबारे नयाँघरेले पहिलो न्युजका लागि विवश वस्तीलाई यसरी बताएः
तपाईंले घुम्न धेरै मन पराउनु हुन्छ । देशभित्रका कति जिल्लाको यात्रा पूरा गरिसक्नुभयो अहिलेसम्म ?
–ठीकै भन्नुभयो, म घुमघाम प्रिय मान्छे हुँ । फुर्सद मिल्यो कि घुमिहाल्न रुचाउँछु । अहिलेसम्म देशका ६९ जिल्ला घुमिसकेँ । अञ्चलको हिसाबले सबै अञ्चल टेकिसकेँ ।
तपाईंले घुम्नु भएका प्रमुख ठाउँहरु चाहिँ कुन–कुन हुन् ?
–सगरमाथाको दक्षिणी भाग, कर्णालीका धेरै क्षेत्र, अरुण उपत्यका, तराईका लगभग सबै ठाउँ र पूर्वी पहाड मैले घुमेका प्रमुख ठाउँ हुन् । चालीस वर्ष नपुग्दै मेची महाकालीसम्म पुगेँ म ।
देशभित्र ६ जिल्ला बाहेक सबै जिल्ला घुम्नुभएछ । बाहिर चाहिँ कुन–कुन देश घुम्नु भयो ?
–अमेरिका, जापान, सिंगापुर, भारत, भुटान, कतार आदि पुगिसकेको छु । यी देशमा कतै हवाई, कतै जल, कतै सडक, कतै रेल, कतै डेजर्ट सफारीको अनुभव गरेको छु ।
देशभित्र घुम्दा कुन–कुन ठाउँहरु मन प¥यो तपाईँलाई ?
–रसुवाको स्याफ्रुबेंसी, ओखलढुंगाको रुम्जाटार, मुगुको रारा ताल, कास्कीको घान्द्रुक, प्यूठानको स्वर्गद्वारी, जुम्लाको सिञ्जा उपत्यका र सोलुखुम्बुको पत्ताले आदि मन प¥यो मलाई ।
कुन ठाउँ पुग्दा वा घुम्दा असाध्यै मोहित हुनुभयो ?
–दोलखाको च्छोरोल्पा हिमताल पुग्दा म अति नै मोहित भएँ । यो औधी नै विकट ठाउँमा रहेको छ । विकटतामा आनन्दी पनि बिछट्टै हुन्छ ।
घुम्न मन लागेको तर पुग्न नसकेको नेपालभित्रको कुन ठाउँ होला तपाईंको ?
–गोर्खाको चुम उपत्यका र खुम्बु उपत्यका पुग्न पाएको छैन । ढिलोचाँडो पुग्छु म । मन पुगेको ठाउँमा शरीर नि पुगिछाड्छ मेरो त ।
हिमाल, पहाड र तराईमध्ये घुम्नका लागि कुन भूभाग राम्रो ठान्नु हुन्छ ?
–हिमाल र पहाड विशेष मन पर्छन् । पानी, जङ्गल, जनजीवन र सौन्दर्यको प्रचूरता यहीँ भेटिन्छन् । दुःख र कठोरता नि यतै भेटिन्छ । यही कठोरता नै मनमा यात्राको मीठो र गहिरो छाप बनेर बस्न पुग्छ ।
घुमफिर गर्नुको मुख्य उद्देश्य के हो ?
–ज्ञान सिक्न र हृदयलाई ऊर्जा दिन घुमफिर गर्छु म । जीवन बुझ्न त नघुमी सुख्खै छैन । मेरो नारा नै छ, ‘डुलौँ, आफ्नो आयु बढाऔँ’ ।
घुमफिरका क्रममा भेटिएका मानिसहरुसँग कसरी सौहार्दता बाँड्नु हुन्छ ?
–उनीहरुको भाषा र स्थानीय चालचलनलाई सम्मान गरिदिएमा स्वतः सौहार्दता बढ्छ । म त्यसै गर्छु ।
घुम्ने क्रममा नेपालभित्र भेटिएका कुन ठाउँका मानिसहरु आत्मीय र इमानदार लागे तपाईंलाई ?
–गोर्खाको उत्तरी क्षेत्र बारपाक र लाप्राकका मानिसहरु बढी आत्मीय लागे । उनीहरुको व्यवहार साँच्चै नै हार्दिक र मायालु छ ।
घुम्ने क्रममा कतै सास्ती पनि बेहोर्नु परेको थियो ?
–घुमफिर गर्दा अनेकौँ समस्या धेरै चोटी बेहोरेको छु । बास नपाएका, जाडोले लुगलुगिएका, बिरामी भएका अनेकौँ सास्ती खपेको छु । त्रिशुलीमा ¥याफ्टिङ गर्दा अकस्मात आँधीबेरी आएर झण्डै डुंगा पल्टिएको थियो । दोलखाको सिमी गाउँ झर्दा चार घन्टासम्म असिना–पानी र चट्याङ खप्दै अँधेरी रातमा उकाली–ओराली हिँडेको यात्रा कहिल्यै बिर्सिन्न म । भोकै र तिर्खै लम्केको, रातभरि हिँडेका अनुभूति झन् धेरै छन् मसँग ।
यात्राका निम्ति सहज ठाउँ कुन लाग्यो र कठिन ठाउँ कुन लाग्यो तपाईंलाई ?
–कर्णालीका धेरै गाउँ पुग्न कठिन र तराईको लुम्बिनी पुग्न सहज छ । यद्यपि यी दुवै ठाउँमा मैले पैदलै यात्रा गरेको छु ।
एक पटक घुमिसकेको कुन ठाउँ तपाईंलाई फेरि पनि जान मन लागेको छ ?
–रोल्वालिङ उपत्यका फेरि जाने मन छ । तर निकै गाह्रो, कष्टकर र जटिल छ त्यहाँ पुग्नलाई । गोठ, ओढार र रुखका टोड्कामा समेत रात कटाउनुपर्ने हुन्छ त्यताको यात्रामा । हरेक दृष्टिले मनमोहक ठाउँ हो त्यो ।
यात्राका क्रममा के–के सामानहरु बोक्नु हुन्छ ?
–यात्रामा हलुका हुनुपर्छ । एउटा लाइट, मौसमअनुसार दुईतीन जोर लुगा, एउटा स्लिपिङ ब्याग बोक्छु प्रायः । केही खर्चबर्च पनि । झोला गरुङ्गो भए, संसार पढ्न हिँडेको मन रित्तै र भोकै फर्कन्छ ।
यात्रामा कति जनासम्म साथीहरु लिएर जान उपयुक्त लाग्छ तपाईंलाई ?
–बढीमा तीन जनासम्म जाँदा ठीक लाग्छ । एक्लै हिँड्नु हुन्न । कहिलेकाँही बिरामी भइन्छ, जंगली जन्तुको हमलामा परिन्छ । दुई जनासम्म भए हरेक कुराले घुमघाममा जाति हुन्छ । पानी खान जरुवामा घोप्टिँदा वा आँखाको बिख मार्न थाल्दा सँगैको साथीले पालो बसिदिन्छ नि त !
यात्राले दिने सुखद् कुरा के हो ?
–यात्राले धेरै कुरा दिन्छ । संसारका कुनै पुस्तकमा पढ्न नपाइने ज्ञान, कतै खान नपाएको स्वाद, कतै नदेखेका दृश्य र कसैले नबाँडेको आनन्ददायी अनुभूति यात्राले दिन्छ । खुट्टा दुखाइ–दुखाई हिँडेको र पसिना चुहाइ–चुहाई गरेको घुमघाम अर्बौं–खर्बौं मूल्यमा पनि किन्न पाइन्न ।